Koronaavaayirasi: Qorattoonni vaayirasichi Hagayya 2019 keessa Chaayinaatti mul'achu hin ollee jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayirasi: Qorattoonni vaayirasichi Hagayya 2019 keessa Chaayinaatti mul'achu hin ollee jedhu
15 Waxabajjii 2020
Weerarri koronaavaayirasii jalqaba Wuhaan keessatti mullatuunsaa himame
Qorannoon dhiheenya kana gama US irraa bahe tokko koronaavaayirasiin Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessatti bara darbe jalqaba baatii Hagayyaa keessa mudachuu hin oolle jedheera.
Qorannoon Yunvarsitii Haarvaardiin jalqaba baatii kanaatti ifa taasifamee kun mootummaa Chaayinaafi saayintiistoota walabaatiin fudhtama hin arganne.
Qorannichi maal jedhe ture?
Qorannichi fakkiiwwan sochii taraafika naannoo hospitaaloota Wuhaan keessaa saataalaayitiin fudhatameefi qorannoo barbaacha (search) jechoota mallattoo wal'aansaa addaa intarneetii irratti taasifamee ture irratti kan bu'urreeffateedha.
Haaluma kanaan dhuma Hagayyaa hanga Muddee 1, 2019'tti hospitaaloota magaalaa Wuhaan keessaatti argaman jaha alatti baay'inni konkolaataawwan dhaabbatanii baay'ee hedduutu mullatee jedheera.
Weeraroota shan seenaa addunyaa jijjiiran
Mallattoo Covid-19 warri hin qabne daddabarsuun isaanii hagas mara 'hin beekamu' -WHO
Kunis gabaasa Haarvaard kan barbaachi jechoota mallattoowwan koronaavaayirasii intarneetii irratti taasifame kan akka ''qufaa'' fi ''garaa kaasaa'' ol ka'ee mullateera jedhe waliin kan wal simee ta'eera.
Wuhaan keessatti namni vaayirasichaan qabame hanga jalqaba Muddeetti hin gabaafamne ture.
Qorannoon Haarvardi kun pireezidant Tiraamp yeroo baay'ee weerarichaaf haala Chaayinaan itti deebii kennite qeeqaa turuu waliin midiiyaaleerratti xiyyeeffannaa baay'ee argatee ture.
Argannoon qorannichaa fuula tiwiitara Oduu 'Fox' irratti maxxanfamee turees yeroo miliyoona sadii ol dubbifamee ture.
Ragaan isaanii kun hangam amanamaadha?
Qorannichi namoonni mallattoowwan dhukkubbii koronaavaayirasii ta'an keessattu 'garaa kaasaa' biyya Chaayinaa keessa intarneetii irra barbaadaa turan yeroos akkaan dabaleera jedha.
Haa ta'u malee, qondaalonni kubaaniyaa Baayidu marsariitii hawaasaa Chaayinaa keessatti beekamaa ta'ee ammoo bu'aa qorannoo kanaa hin fudhannee.
Qorattoonni haala sochi tiraafikaa magaalaa Wuhaan xiinxalan
Siriiyyuu tibba jedhame sanatti namoonni jecha 'garaa kaasaa' barbaadaan hir'atee ture jechuun qorannicha kuffisan.
Dhugaattis barbaachi jecha kanaa yeroo qorannichi jedhe Hagayyaa 2019 irraa kaasee hin daballe ture.
Hanga weerarichi eegaluutti Wuhaan keessatti hir'achaa deemaa jiraachun hubatameera.
Dureen waraqaa qorannoo Yunivarsitii Haarvaard kan ta'ee Beenjaamiin Raadar BBC'tti akka himeetti, ''jechi barbaachaa nuti 'garaa kaasaaf' filannee sababii namoota Covid-19n qabamaniif sirriitti walsimuuf jecha kan filannee ture,'' jedheera.
Kana malees jechoota mallattoo koronaavaayirasii lama 'gubaa qaamaa' fi 'arganuuf rakkachuu' fa'is barbaadamun isaanii ilaalamaniiru.
Haggayya keessa namoonni jacha 'gubaa qaamaa' jedhu barbaadan hanga tokko dabalee ture, kan jecha 'qufaa' jedhu barbaadaniin haaluma walfakkaatuun.
Haa ta'u malee yeroo sana keessa namoonni jecha 'arganuuf rakkachuu' jedhu barbaadan gadi bu'eera tibba sana keessa.
Akkasumas qorannichi garaa kaasaa akka mallattoo dhukkubichaatti fayyadamuunis gaaffiiwwan kaaseera.
Qorannoo UK keessatti dhukkubsattoota kuma 17 ta'an irratti gaggeeffameen garaa kaasaan mallattoo irratti mul'ate torbaffaa ta'uun adda baafameera.
Haa ta'u malee kan baay'inaan mudatu qufaa, gubaa qaamaa fi arganuuf rakkachuudha.
Baayyinni lakkoofsa konkolaataa hoo maali hima?
Qorannoon Yunivarsitii Harvaardiin gaggeefamee kun akka mulliseetti, hospitaaloota jahan hunda keessattuu Hagayyaa hanga Muddee 2019tti konkolaattoonni lafa dhaabinsaatti mul'atan baay'ee hedduudha.
Lakkoofsi konkolaataa dabaluun haala hin baramneen namni hedduun gara hospitaalaa deemuu agarsiisa jedhu warri qorannicha barreessan.
Madda suuraa, Harvard University
Qorattoonni fakkiiwwan saataalaayitii irraa fudhame hospitaaloota Wuhaan hubannoo keessa galachan
Haa ta'u malee, fakkiiwwan saataalaayitii lafa konkoolaataan hospitaaloota keessatti dhaabamu midiyaaleerratti gadii dhiifamees, bakkeewwan kunneen gamoowwan dheeraadhaan dahamaniiru.
Kana jechuun ammoo lakkoofsa konkolaatawwan turan sirriin argachuuf baay'ee rakkiisaa taasisa.
Akkasumas hospitaala Tiyaanyau keessaa bakki konkolaataan dhaabamu lafa jala jira. Kanaafuu adeemsa kanaan argamuu hin danda'u. Garuu ammoo konkolaatawwan lafa jala dhaabbatan osoo hin taanees seensa isaa qofatu fakkii saataalaayitiin argama ture.
Barreessitoota qorannichaa keessaa tokko kan ta'e Beenjaamiin Raader akka jedheetti, ''dhuggaattis tibba qoranichaatti konkolaataawwan lafa jala dhaabbatan lakkaa'uun hin danda'amu. Kunis hanqina gosa qorannoo akkanaati.''
Kana malee haala hospitaaloota qorannichaaf filataman ilaalchisees yaaddoowwan ka'an jiru.
Hospitaallii Dubartootaafi Da'immanii Hubee iddoowwan qoranichaan hammatame keessatti argama. Haa ta'u malee daa'imman koronaavaayirasiin wayita qabaman wallaansa fayyaa barbaadan baayye gadaanaadha.
Qorattoonni kanaaf deebii wayita kennan, hospitaalli kun qorannicha keessaa baafamuus dhiisuuf lakkoofsi konkolaataa tibba sanatti mullatee akka dabalee agariisa jechuun mormu.
Akkasumas qorattoonni lakkoofsi baay'ina konkolaataafi barbaachi jechoota mallattoo wal'aansa koronaavaayirasii Wuhaan keessatti mul'ate jedhame sanas ragaa hospitaaloota Chaayinaa keessaa bakka biraatti argaman waliin wal bira qabuun ni barbaachisa ture.
Dabalataanis dhimmicha qabatamaa ta'u mirkanneessuun jiraattoota Wuhaan koronaavaayirasiif Hagayyaa kaasanii wallaansa argatan dubbisuun gumaata biraa ta'a ture.
Walumaagalattis, waa'ee vaayirasichi yoom akka Wuuhaan keessa faca'ee jedhuu ilaalchisee ammalleen wanti hin beekamiin hedduutuu jira.
Koronaavaayiras: Weeraroota shan seenaa addunyaa jijjiiran
11 Waxabajjii 2020
Koronaavaayiras: Mallattoo Covid-19 warri hin qabne dabarsuun isaanii hagas mara 'hin beekamu' -WHO jedhe WHOn
10 Waxabajjii 2020
Badhaadhinni waraana TPLF waliiniif falli karaa nagaa akka barbaadamuuf murteesse
Daqiiqaa 36 dura